यु–ट्युब ट्रेण्डिङमा टप १ पुग्न लाग्दै ‘तिम्ले बाटो फे-यौ अरे–२’ «
यु–ट्युब ट्रेण्डिङमा टप १ पुग्न लाग्दै ‘तिम्ले बाटो फे-यौ अरे–२’
प्रकाशित मिति : २० मंसिर २०७५, बिहीबार ०५:३८
काठमाण्डौ- ‘तिम्ले बाटो फेर्‍यौ अरे’आधुनिक गित तर्फ करोडको भिउज पुग्ने पहिलो नेपाली गित हो । आफ्नै करोडको रेकर्ड तोड्दै आज नेपाली साङ्गितिक क्षेत्रमा नयाँ आयम थपिएको छ । आफ्नै रेकर्ड तोडदै केहि दिनमा नै ‘तिम्ले बाटो फेर्‍यौ अरे-२’ टप १००, टप ५०, टप २० हुँदै टप ८ मा आईपुगेको छ, अझ टप वानमा चढने क्रममा छ ।
युवा चर्चित गीतकार दर्पण राईको चर्चित गीत ‘तिम्ले बाटो फे-यौ अरे–२’ लाई यु–ट्युबका दर्शकले अत्याधिक मन पराएका छन् । किन दर्शकले मन पराए भन्ने सवाल सबैको मनमा उठन सक्छ । मोडल तथा गितकार दर्पण राईले गित लेख्न बितिकै रेकर्ड हुने हो ? मेलिना राईले गित गाउने बितिकै हिट हुने हो ? बिक्रम राईले संगीत गर्ने बितिकै तहल्का हुने हो ? तर तीन जनासँगसङ्गै अरु पर्दा पछाडिको नायाकहरु पनि छन । यस गितमा कोर टिमको अति धेरै मेहनत रेहेको छ । यि तीन जनाको किरातिको तीन चुला जस्तै गरी ‘तिम्ले बाटो फे-यौ अरे–२’ बनाएका छन । किराती तीन चुलाको दर्शन जसरि आगो र पानी दन्द्दत्माक सिद्दान्त छ, त्यस्तै गरी माया प्रेममा पनि मिलन बिछोडा छ, यो दन्द्दत्माक कुरालाई चोखो मायाको कुरा गित मार्फत गरिएको छ ।
यस गितलाई गितकारले शब्द निकै उत्कृष्ट रेहेको छ्, संगीत निकै मेहनले गरेको छ । सगितकारले यस गितकै लागी भनेर ३/४ वटा अरु संगीत कम्पोज गरिएको थिए एक भेटमा मुन्धुम्स्टारलाई बताए । मेलिना गित गाउदा र सुटिङको क्रममा मन्, मुटु र मतिष्कबाट रियल भाबना डुबेर ४० मिनेट सुटिङ ब्रेक समेत गरेको हुनाले यो गित यती मिठो बनेको कुरा गितकार दर्पण राईको छ । हृदयबाट निस्केको मिठो गुन्जन नै ‘तिम्ले बाटो फे-यौ अरे–२’ भन्न सकिएला भन्ने प्रश्नमा गितकार र संगीताकार दुबै हासे । अत्: गित मिठो हुनुमा बिगतको टिमको मेहनत नै हो ।